मुख्य – Page4– Banking Khabar
राष्ट्रिय स्तरका सात विकास बैंकको रिपोर्ट : कुनको मुनाफा कति ?
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय स्तरका १२ वटा विकास बैंकहरुमध्ये, हालसम्म सात वटाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सात बैंकमध्ये, पाँच वटाले नाफा घटेको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंक र ज्योति विकास …
अब खाता खोल्न बैंक जान नपर्ने, एनआईसी एशिया बैंकले संचालनमा ल्यायो अनलाइन बचत खाता
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुको माग तथा चाहना बमोजिम “एनआईसी एशिया अनलाइन बचत खाता” संचालनमा ल्याएको छ । देश तथा विदेशमा रहेका ग्राहकहरुलाई सजिलै खाता खोल्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त बचत खाता संचालनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । अनलाइन …
विकासको बाधक बन्यो : स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
बैंकिङ खबर । विदेशी सहितको लगानीमा खुलेका केही बैंकहरु विकासका लागि बाधक देखिएका छन् । उनीहरुका कारण बैंकिङ पहुँच बृद्धिमा पनि समस्या देखिएको छ । नेपालमा केही सिमित बैंकहरु विदेशी लगानीमा संचालीत छन् । यहाँ उदाहरणीय एक बैंकलाई अघि सारीएको …
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र दोहा बैंकबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र कतारको दोहा बैंक बीच विप्रे्रषण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कतारको राजधानी दोहामा एक कार्यक्रम बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । कतारका लागी नेपालका राजदूत महामहिम रमेश कोइरालाको समुपस्थितिमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी …
१६ लघुवित्तको प्रथम त्रैमासिक रिपोर्ट : कुनको अवस्था कस्तो ?
बैंकिङ खबर । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अधिकांश लघुवित्तको मुनाफामा गिरावट आएको छ । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका १६ लघुवित्तमध्ये, सात वटाको नाफा घटेको छ भने एउटा लघुवित्त घाटामा रहेको छ । आठ वटा लघुवित्तले भने नाफा बढाएको विवरण …
सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’
मेनेजमेन्ट विद्यार्थीलाई बैंकिङ शिक्षा, हेर्नुहोस् २५ बुँदामा
बैंकिङ खबर । पछिल्लो समय बैंकिङ जागीरमा आकर्षण बढिरहेको छ । फलस्वरुप, व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या बढेको छ । यसले बैंकिङ जागीरमा प्रतिष्पर्धा बढाएको छ । त्यसमाथि सर्ट्फििकेटकै भरमा बैंकमा जागीर पाउँछु भन्ने विद्यार्थीहरुको सोचाईका कारण उनीहरु बेरोजगार …
ओएपीको सम्मेलनमा गभर्नर डा. नेपालद्धारा सम्बोधन
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को Regional Office for Asia and the Pacific (OAP) को २०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले सहभागीता जनाएका छन् । ओएपीले स्थापनाको २० वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा आईएमएफ र जापानको अर्थ …